Saturday August 14, 2021 - 11:42:01
Mar kaliya ayuun baa lagu war helay kooxda jihaadiga ah ee Daalibaan oo la wareegaya dhulal horleh oo kamid ah waddanka afgaanistaan labadii bilood ee u dambeeyay. Xarako hubaysan oo xukuntay badi waddanka Afgaanistaan sannadihii 1996-2001, waxa soo marey maalmo dahabi ahaa iyo kuwo kale oo qadhaadhaa, maalmo dagaal kudhufo oo ka dhaqaaq ah iyo maalmo kale oo ay gali jireen dagaal toos ah. Guulo iyo guuldarrooyin ayey la soo kulmeen laakiin culayska waayuhu kama uu dhigin rag cataaba!.
Magacooda iyo Asalkooda.
Sida aad ka garan kartid magaca Daalibaan oo haddii la turjumo noqonaysa ardey ayey kooxdu uga aas aasantay madaaristii ardeyda diiniga ahayd ee dalkaas. Waxa bilaabey Mulla Maxamed Cumar sannadkii 1994, koonfur galbeed Afgaanistan oo xuduud la leh waddanka Baagistaan.
Kooxdu waa sunniyiin haysta mad-habka xanafiga ah dhanka fiqiga. Sida Alshabaab dadka ugu badan ee ka tirsani ay u yihiin Soomaali ayaa iyagana afraadda ugu tirada badani u yihiin qoomiyadda Bashtaawga. Bishii Noofambar saddexdeedii 1994-tii ayaa afhayeen ku hadlay magacooda oo la odhan jirey Mulla Cabdi Mannaan uu sheegay in kooxdu u taagan tahay islaaxinta waddanka iyo la dagaallanka qawlaysatada bannaystay dhiigga iyo xoolaha dadka. Kolkii ay qabsadeen gobollo fara badan ayay iclaamiyeen in ay kooxdu u taagan tahay dhisitaanka dawlad ku taagan manhajkii rasuulka SCW, sidaasna waxa sheegay hoggaamiyahoodii Mulla Maxamed Cumar kadib markii uu Warmurtiyeed ka hor jeediyey culimada Qandahaar maalintii afraad ee bishii abriil 1996-dii(sagaashan iyo lixdii). Ujeeddooyinka ugu waaweyn ee ururka wax uu ahaa in ay diinta islaamku noqoto isha koowaad ee loo noqdo sharci ahaan iyo in dadka iyo dawladduba ay islaam yihiin.
25-kii May 1997 ayaa dawladda Baagistaan ay ictiraaftay xukuumaddii Daalibaan kaddibna waxa ku xigey Sucuudiga iyo dawladda Immaaraatka. Kooxda ayaa awooddeeda laga dareemay dhammaanba dhulka Afgaanistaan halka dadka arrimaha siyaasadda ka faalloodaa ay sheegaan in ay la wareegeen 90% dhulkooda.
Hoos u dhacii awoodeed ee kooxda.
11-kii September 2001 waxa lagu tiriyaa ayaamihii bilawga hoos u dhaca awoodeed ee kooxda inkastoo aaney marnaba niyad jabin. Waa markii la qarxiyey labadii fooq ee mataanaha ahaa ee Maraykanka. Qaraxa kaddib Maraykanku wax uu ku tuhmay ururka Alqaacida in uu ka dambeeyay falkaas, Alqaacidana markaas wax ay fadhiisimo ku lahaayeen goobaha Daalibaanku ka taliyo. 22 Sep, 2001 kaddib culaysyo caalami ah oo la saarey waxa ka noqday ictiraafkii ay siiyeen Daalibaan dawladdaha Sucuudiga iyo Immaaraatka. Baagistaanna wax ay sii ahayd dawladda keliya ee ictiraafsan xukuumaddii Daalibaan, inkastoo iyaduna markii dambe ay cilaaqaadka u jartey. Ugu dambayn bishii Oktoober 2001-dii ayaa Mareykanka iyo xulafadiisu dagaal ku qaadeen Xukuumaddii Daalibaan iyagoo adeegsanaya calooshood u shaqaystayaal Afgaaniyiin ah(Jabhaddii Waqooyiga). Maalmahaas wax ay galeen Daalibaaniyiintu dagaallo khatar badan, wax ay sameeyeen naf-hurnimo la yaab leh oo ay la galeen Maraykanka, xulafadiisii dibadda iyo calooshood u shaqaystayaashii gudaha.
Afduubyo iyo dilal qorshaysnaa oo ka dhacay Kaabuul gaar ahaan sannadihii 2008-2009 wax ay ciidamada shisheeye sheegeen in ay kaga dhinteen illaa 3000 oo askari hawlgalka ay ku joogaan Afgaanistaan. Laga soo bilaabo sannadkii 2010-kii wax ay bilaabeen ciidamada shisheeye in ay wadahadal la furaan ururka Daalibaan. Isku dayadii wada hadal ma ay joogsan illaa 18 May, 2013-kii dawladda Qadar ay u oggolaatey ururka Daalibaan in ay xafiis ka furtaan Qadar si xal looga gaadho arrinta murugsan ee Afgaanistaan. 2014 ayey dawladda Maraykanku Codsatey in Daalibaan ay sii daayaan Askari Ameerikaan ah oo u xidhnaa shan sano, halka iyaguna ay sii dayn doonaan shan kamida hoggaamiyeyaashii Daalibaan oo ku xidhnaa xabsiga Guwaantannaamo. Haddii la soo gaadhey bishii luulyo 2015 waxa geeryoodey hoggaamiyihii ururka Daalibaan Mulla Cumar, taas oo keentay in ururku uu isla markiiba doorto hoggaamiye cusub.
Soo kabashadooda cusub.
Haddaba intii ay ciidamada Mareykanka iyo ururka Daalibaanku heshiiska ku galeen in maraykanka iyo xulafadiisu ka baxaan dhulka Afgaanistaan horraantii sannadkii hore sidii uu Midawgii Soofiyeetku uga baxay kaddib toban sano oo dhiig bax ah sannadkii 1989-kii ayaa waxa sii xoogaysanaya weerarrada Daalibaanku kula wareegayaan dhulkooda isla markaana meesha uga saarayaan dawladda maqaarsaarka ah ee Afgaanistaan.